Isi nri na ...
Njirimara ụdị osisi dị iche iche
Ihe na 15.06.2021 15.06.2021
Onwere otutu osisi, nke osisi ndi ichoro, maka otu ebumnuche? Ka anyị lebakwuo anya na uru na ọghọm dị n'ọhịa dị iche iche.
Ihe na 02.06.2021 02.06.2021
Ihe kachasị sie ike n'ịhọrọ bụ ịghọta ihe na ebumnuche dị gị mkpa. Anyị ga-agwa gị gbasara isi njirimara nke profaịlụ profaịlụ, ụdị dị iche iche, uru na ọghọm ha.
Gypsum eriri akwụkwọ maka ala leveling
Ihe na 01.06.2021 01.06.2021
Mgbe ị na-arụzigharị ụlọ, ọtụtụ na-eche nsogbu nke gbagọrọ agbagọ sitere n'aka onye nrụpụta ahụ. Kedu otu esi edozi ala, olee ụlọ ihe eji eme? Ka anyị lelee mbadamba GVL.
Oroma - bara uru Njirimara, ọgwụgwọ, Ezi ntụziaka
Ihe na 11.05.2021 11.05.2021
Mkpụrụ osisi citrus a nwere akụkọ ihe mere eme na ojiji bara ụba, ọgwụgwọ, na nri. Ka anyị chọpụtakwuo gbasara eze mkpụrụ osisi citrus - Oroma!
Rosemary mmanụ dị mkpa
Ihe na 10.05.2021 10.05.2021
Ọ bụrụ na enweghị ego maka ihe nkpuchi ntutu dị oke ọnụ, ma ọ bụ na ị anataghị nsonaazụ a tụrụ anya. Mee nkpuchi mmanu mmanu rosemary.
Ihe na 05.05.2021 05.05.2021
N'ụwa nke oge a, mgbe mmadụ niile na-eme ọsọ ọsọ, ha na-arụ ọrụ dị ukwuu ma tinye obere oge na ahụ ike. Onye ọ bụla enwewo ịda mbà, ma otu esi emeso ya, enwere ike izere ya?
Mpịakọta anụ ezi - nri biya
Ihe na 22.04.2021 22.04.2021
Chọrọ nri dị ụtọ, mana ọ bụghị nke nwere kalori dị elu maka biya? Akwukwo nri na-apụta! Ma ndị ọbịa dị otú a, dị ka a ga-asị na ha anwalebeghị ya ebe ọ bụla ọzọ.
Ezi na prunes na ngwa ngwa ngwa nri - uzommeputa
Ọ bụrụ na ịchọrọ nri abalị na-adịghị ahụkebe, mana ịchọrọ ịchekwa oge ma sie ya na ngwa ngwa ngwa - anụ ezi na prunes, mgbe ahụ ihe ị chọrọ! Dị Mfe, na-eju afọ, na-atọ ụtọ!
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị - Ndụmọdụ Dị Mfe Maka Ndị Nwoke
Ihe na 20.04.2021 20.04.2021
Isi zere oke ihie ụzọ mgbe ị na-akwadebe maka ụbọchị, gịnị ka a na-ewere dị ka ihe kwesịrị ekwesị na gịnị ka a ga-ezere? Gụọ ma bụrụ mgbe niile "n'ịnyịnya"
Ajụjụ ndị mara mma mara mma ị bụụrụ gị ihere ịjụ
Ihe na 17.04.2021 17.04.2021
Enwere ọtụtụ ajụjụ gbasara ahụike na ịma mma, ma ọ bụghị ha niile na-ajụ ha ozugbo. Ka anyị tụlee ma ọ dịkarịa ala ụfọdụ n’ime ha!
Agaghị ekewa mmadụ abụọ - ọ bụrụ na ị hụrụ enyi gị n'anya
Ihe na 15.04.2021 15.04.2021
Ndụ abụghị ihe dị mfe, agbanyeghị na ịhụnanya dịkwa, ma ọ bụrụ na gị na enyi gị ahụrụ otu nwa okorobịa? Kedu ka esi aga n'ihu? Ihe ịhọrọ - ọbụbụenyi ma ọ bụ ịlụ ọgụ maka nwa okorobịa? Anyị ga-agba mbọ ịghọta okwu a!
Ista custard na cherị - a delicious uzommeputa maka ezumike
Ihe na 14.04.2021 14.04.2021
Onye ọ bụla chọrọ ime ememme Ista na ụzọ dị ụtọ ma dịgasị iche iche, wepụ nri ahụ - ihe ụtọ, ihe ọhụụ - agaghị echefu echefu!
Romancelọ ọrụ mmekọrịta - Iwu nchekwa 7
Imirikiti ndụ anyị ejirila na-arụ ọrụ, ị nweghịkwa ike ịtụrụ obi gị, mba, mba, mana nwa amadị ga-atụgharị. Ọfịs ọfịs na-atọ ụtọ, mana enwere iwu ole na ole ị ga-agbaso!
Ista: nhọrọ nke nkwenkwe ochie na akara ngosi ihu igwe
Ihe na 13.04.2021 13.04.2021
Naa, ọtụtụ agba nkịtị Ista bụ nnọọ oge a - agwa, Anụ Mmịkpọ. Kedu ka ndi nna nna anyi mere emume Ista? Omenala na ihe ịrịba ama dị a wereaa dị na ezumike a?
Kwụsị iri nri ụtọ
Ọtụtụ ndị agụworị ihe egwu shuga na ihe na ato uto? Ma olee otú anyị pụrụ isi jụ ha? Kedu ụzọ dị mma iji kwụsị iri nri ụtọ?
Na-eri protein gị!
Dị ka ụmụ mmadụ, osa nwere ihe isi ike n'ọrịa ahụ - oke nri belata, nke a metụtara ndị bi na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ! Nyere ndị anyị hụrụ n'anya pussies-adị ndụ!
Ọtụtụ kwadoro okroshka
Anyị niile maara ya ebe ọ bụ na nwata, na-atọ ụtọ, dị mma, na-enye ume okroshka. Ka anyị chọpụta otu - ebee ka o si bịa? Olee uru ọ bara? Ezi ntụziaka maka kpochapụwo na nke mbụ okroshka!
Turkey bụ mba dị na njiko nke kọntinent abụọ
Ihe na 08.04.2021 08.04.2021
Turkey site n'anya nke ndị njem nleta bụ osimiri ndị mara mma na ugwu ndị dị elu, Istanbul na-adọrọ mmasị na ihe ncheta nke oge ochie. O nwekwara nri dị ịtụnanya, ụlọ alakụba mara mma na obere ụlọ ahịa mara mma na nnukwu ugwu dị na Kapadoshia.
Ezi kebab uzommeputa n'ụlọ
Ihe na 06.04.2021 06.04.2021
N'isiokwu a, a ga m ekekọrịta ụzọ esi eme achịcha n'ụlọ. Kedu anụ ị ga-ewere, otu esi esi sie ma sie nri. Aga m agwakwa gị ihe kpatara m ji ahọrọ brik nkịtị karịa igwe eji anụ ọkụ, na nkụ iji zụta unyi.
Maka oge nke kebabs: pike lula na unyi - uzommeputa maka isi nri
Dịka uzomme a si dị, lula dị ụtọ ma na kemmiri ihe na icheku nwere ike ịkwadebe ọ bụghị naanị site na pike. Azụ mmiri ndị ọzọ dịkwa mma: perch, big roach, carp. Isi ihe bụ fillet ọhụrụ, ụlọ ọrụ dị mma na nnukwu ọnọdụ!
© Copyright 2017 - 2021 Ozi bara uru maka onye ọ bụla
Ajuju 55 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 1,826.